साङ्लाले बाँधिएका लीला उपचारपछि घर फर्किए « प्रशासन
झापा । सत्र वर्षदेखि साङ्लोमा बाँधिएका बाह्रदशी गाउँपालिका– ३ राजगढका १९ वर्षीय लीला चम्लागार्इं उपचारपछि सोमबार घर फर्किएका छन् ।
केही समाचार माध्यमले फागुन ३० गते १७ वर्षदेखि साङ्लोमा लीलाप्रसाद शीर्षकमा तस्बीर सहितको समाचार प्रकाशन गरेपछि उनको विर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसार्इं, मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सन्दिप बर्मा र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद तिवारीलगायत टोलीले चम्लागार्इंको घरमै पुगेर लीलालाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याइएको थियो ।
चैत १ गते अस्पताल भर्ना भएका लीलको सम्पूर्ण औषधि उपचार अस्पतालले निःशुल्क गरेको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमिष गिरीले बताए ।
दुई सातासम्म अस्पतालमा डा. बर्मासहितको चिकित्सक टोलीले उनको उपचारपछि सोमबार लीलालाई एक समारोहको आयोजना गर्दै घर फर्काइएको छ ।
सो अवसरमा उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बर्माले लीलालाई अब साङ्लोले बाध्नु नपर्ने बताए । उनमा बुद्धिको विकास नभएको र छारे रोगका कारण यस्तो समस्या देखिएको भन्दै उनले केही समयसम्म लीलाले निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताए ।
२०५४ सालमा जन्मिएका लीला बाल्य अवस्थादेखिनै बोल्दैनथे । उनको दाँहिने हातसमेत नचल्ने र टोलाइरहने स्वभावका उनी अहिले सबै कुरा बुझ्नसक्ने भएको उनकी आमा जानुकाले बताईन् । उपचारपछि छोरो निको भएको भन्दै उनले उपचारमा सहयोग पु¥याउने सबैलाई धन्यवाद दिएकि छिन् ।